Ady amin’ny tazomoka: 13 tapitrisa ny lay hozaraina manerana ny Nosy | NewsMada
Ady amin’ny tazomoka: 13 tapitrisa ny lay hozaraina manerana ny Nosy
Natomboka amin’ny fomba ofisialy ao amin’ny kaominina Anosy Tsararafa, distrikan’ i Farafangana, faritra Atsimo Atsinanana, ny fizarana lay misy odimoka maharitra ny asabotsy teo. Mahatratra 13 129 500 ireo lay misy odimoka hozaraina indroa miantoana amin’ny distrika 106 manerana Nosy.
Fiarovana mahomby amin’ny tazomoka ny fatoriana anaty lay misy odimoka isan’alina, mandavantaona.
Mbola mitana ny laharana fahefatra i Madagasikara amin’ireo firenena mbola ahitana ny aretina tazomoka. Anisan’ny antony telo voalohany hanatonan’ny marary ny tobim-pitsaboana, indrindra ny any ambanivohoutra, ny aretina tazomoka. Antony fahefatra mitarika fahafatesan’olona betsaka ihany koa ity aretina ity raha ny antontanisa eny amin’ny hopitaly.
Anisan’ny mpamatsy vola amin’ity ady amin’ny tazomoka ity ny Amerikanina, eo koa ny Tahirimbola iraisam-pirenena sy Malaria Initiative PMI/ USAID.
Anisan’ny faritra hisitraka ny fizarana lay misy odimoka ny ao Vakinankaratra. Hotanterahina ny volana septambra izao ny fizarana ka ireo distrika dimy mandrafitra ny faritra ihany aloha no hahazo tombony amin’izany.
Anisan’izany ny distrikan’i Mandoto, i Faratsiho, Ambatolampy, Antanifotsy ary i Betafo, izany hoe, anatin’ny andiany faharoa ka “Fonds mondial” ny mpamatsy.
Marihina fa distrika 106 manerana an’i Madagasikara no hisitraka izany ka hoferana lay misy odimoka telo farafahakeliny isan-tokatrano ny omena.
Hahazo lay ny 85% -n’ny tokantrano manerana ny Nosy ary ny 80% ny olona kosa, hatory anaty lay misy odimoka isan’alina mandavantaona na mafana ny andro na mangatsiaka.